America Ferrera waxay kubiirtay Jilayaasha WeWork Mini-Series | Waxaan ka socdaa mac
America Ferrera waxay kubiirtay jilayaasha taxanaha yar-yar ee WeWork
Aktarada Mareykanka Ferrera ayaa ku soo biirtay jilayaasha filimka Apple TV + ee taxanaha xaddidan Burburay, kaas oo ku saleysan boodhka isla magacaas oo dukumintiga ka dhigaya kororka iyo hoos u dhaca WeWork. Ferrera, Emmy oo ku guuleystay taxanaha Xun Betty, wuxuu ka mid noqon doonaa jilayaasha 8-daas qaybood ee yaryar ee Jared Leto iyo Anne Hathaway. Podcast-ka ay taxanahani ku saleysan yihiin waxaa laga heli karaa shabakadda Wondery podcast, oo ah barxad ay Apple isku dayday inay iibsato laakiin ugu dambeyntii ku dhammaatay gacanta Amazon.
Ferrera ayaa la ciyaari doonta Elishia Kennedy, oo lagu sifeeyay inay tahay "gabadh da 'yar oo ganacsato ah oo xariif ah oo lagu sasabo inay ku biirto WeWork oo nolosheeda ay u rogmatay natiijo ahaan," sida laga soo xigtay Reporter Hollywood The. WeCrashed waxaa abuuray Lee Eisenberg, oo ah abuuraha Little America. Eisenberg sidoo kale waxay u adeegi doontaa sidii showrunner, halka John Requa iyo Glenn Ficarra si ay u hagaan taxanaha.
Taxanaha WeWork maahan kan keliya ee Podcast Wondery ah ee loogu talagalay Apple TV +. Apple sidoo kale waxay ku guuleysatay xuquuqda taxanaha taxanaha ahaa ee majaajillada ah. Dhimista Albaabka Xiga.
WeWork wuxuu ku dhashay sanadkii 2010 isagoo ah wakaalad dhisme nololeed oo dhan laakiin waxaa loo iibiyey sidii inay tahay bilawga tikniyoolajiyadda (sidaa darteed waxaa maalgeliyey shirkadaha raasamaalka ee maalgashiga). Shirkadani waxay u heellan tahay inay kireysato xafiisyo waaweyn oo markii dambe dadka laga kireysto sidaasna ay tahay waxay bixiyaan nidaam wada shaqeyn.
Burburinta WeWork waxay bilaabatay markay isku diyaarineysay inay dadweynaha u bandhigto. The Wall Street Journal waxay ogaatay in WeWork dhab ahaantii wuxuu ahaa qorshe xafiisyada ka dhigay a Ahraamta ponzi. Xaqiiqdii, isagu kama kiraysnayn xafiisyada waaweyn xafiisyada si uu u kireeyo milkiileyaasha, wuu iibsan jiray. Xagee buu ka keenay lacagta? Laga soo bilaabo agaasimaha guud, Adam Neuman, oo amaahiyay shirkaddiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » America Ferrera waxay kubiirtay jilayaasha taxanaha yar-yar ee WeWork
Raadadka AirTag waxay u shaqeeyaan si aad iyo aad u wanaagsan, marka laga reebo Kuuriya